Posted by: chhepyastra weekly | अगस्ट 15, 2010
मेरो स्वाभिमानले धम्कीलाई स्वीकार गर्न दिएन
रामकुमार शर्म, सभासद् एवं केन्द्रीय सदस्य- एकीकृत नेकपा माओवादी
०	तपाईंलाई भारतीय दूतावासबाट आएको धम्की’boutमा केही बताइदिनुस् न ?
भारतीय दूतावासबाट मलाई दिएको धम्की सार्वभौम सम्पन्न नेपाली जनतामाथिको अपमान र नेपालमाथिको नाङ्गो प्रहारको रूपमा मैले बुझेको छु । विगत लामो समयदेखि नेपाली कम्युनिस्टहरूले आˆनो राजनीतिक दस्तावेजहरूमा सन् १९२० को सुगौली सन्धिपछि हाम्रो मुलुकलाई पराधीन हुन बाध्य बनायो र परनिर्भर हुन बाध्य बनायो भन्दै आएका छन् । हामं्रो मुलुक अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक हो भन्दै आएको कुरा अहिले आएर झनै पुष्टि भएको छ । पछिल्लो समय मलाई भारतीय दूवतासको काउन्सिलरले धम्की दिनु भारतीयको नेपालप्रतिको पुरानो मानसिकता हो । मलाई के लाग्छ भने भारतीय दूतावासबाट धम्की पाउने म नै पहिलो व्यक्ति होइन । यसभन्दा अघि पनि अन्य नेता तथा सभासद्हरूलाई कैयौा धम्की आएका छन् । तर, उनीहरूले त्यो कुरा बाहिर सार्वजनिक गरेनन् । कूटनीतिक मर्यादालाई उल्लंघन गरेर नाङ्गो ढङ्गले गुण्डागर्दी भाषामा ममाथि जुन धम्की भारतीय दूतावासबाट आयो, मेरो स्वाभिमानले धम्कीलाई स्वीकार गर्न दिएन र मैले घटना बाहिर सार्वजनिक गरेा । मैले गरेको विरोधप्रति नेपालका सबै मिडियाहरूले महत्वका साथ लियो यो अत्यन्त स्वागतयोग्य छ । म सभामुखलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु । उहााले मैले उक्त घटना सार्वजनिक गर्नासाथ प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानवअधिकार समितिलाई भेटेर तुरुन्त कामकारवाही अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभयो । त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानवअधिकार समितिको बैठक बस्यो । बैठकले यस घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै कूटनीतिक मर्यादाको घोर उल्लंघन भएको र सम्बन्धित दूतावासका कर्मचारीलाई आˆनै मुलुक पठाउनुपर्ने र राजदूतले माफी माग्नुपर्ने निर्णय समितिबाट भयो । समितिले गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकार बाध्यकारी हुन्छ । समिति भनेको मिनी संसद् पनि हो । मैले यो घटना सार्वजनिक गर्नुको उद्देश्य भारतीय र नेपाली जनताबीच रहादै आएको प्राचीन सम्बन्ध साम्राज्यवादलाई परास्त गरेर लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापित गरेका छन् । भारतीय कर्मचारीतन्त्रबाट भएको यो घटना मेरो व्यक्तिगतभन्दा पनि छ दशक लामो लोकतान्त्रिक संस्कारमा अगाडि बढेको भारतको कर्मचारीमा देखिएको व्यवहारलाई यस घटनाले पुष्टि गर्दछ । दूतावासको कर्मचारीको कारण दुई देशबीचको सम्बन्धमा जुन समस्या देखिएको छ, त्यसमा भारतीय पक्ष संवेदनशील हुनुहुन्छ । समस्या समाधानको लागि उहााहरू पक्कै पनि चिन्तित हुनुहुन्छ । एउटा कर्मचारीको गैरजिम्मेवारीको कारण ठूलो समस्या देखापर्‍यो । आगामी दिनमा यो घटनाबाट पाठ सिकेर अन्य घटना हुादैन भन्ने आशा मैले लिएको छु ।
०	संसदीय समितिको सम्बन्धित कर्मचारीलाई आˆनै मुलुक फर्काउनुपर्छ भन्ने निर्णय त गर्‍यो तर सरकारले यस विषयमा खासै चासो दिएको देखिएन नि ?
सरकारले यस घटनालाई संवेदनशील ढङ्गले लिनुपर्ने हो । भारतीय दूतावासका कर्मचारीले मलाई जुन नम्बरबाट कूटनीतिक मर्यादा नाघेर धम्की दिनुभयो, त्यो टेलिफोन नम्बरसमेत मैले सार्वजनिक गरेको छु । सम्पूर्ण घटनाको छानबिन गर्ने काम सरकारको हो । हाम्रो मुलुक गरिब भएकै कारण, क्षेत्रको हिसाबले सानो भएकै कारण पुनः यस्ता खालका घटना नदोहोरियोस् भनेर नै मैले घटना सार्वजनिक गरेको हुा । सरकारमा कमीकमजोरी छ । हामीले विगतदेखि यो सरकारलाई कठ्पुतली भन्दै आएका थियौा, त्यो अहिले झनै पुष्टि भएको छ । म र गिरिराजमणि पोखरेलले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्यौा, उहााले यो घटना दुःखद हो । म यस विषयमा परराष्ट्रमन्त्रीसाग कुरा गर्छु । यो घटिया कूटनीति प्रयोग भयो भनेर उहााले भन्नुभयो । तर, सरकारले प्रभावकारी ढङ्गले अनुसन्धान गरेन । यस घटनाले ठूलो आन्दोलनको रूप पनि लिन सक्छ । त्यसो हुन नदिन र दुई देशबीचको सम्बन्ध बिग्रन नदिन नेपाल सरकारले तुरुन्त कूटनीतिक तवरमा अगाडि बढ्नुपर्छ ।
०	तपाईंले यस घटना सार्वजनिक गरेपछि भारतीय दबाबमा तपाईंलाई सभासद्बाटै हटाउने तयारी भइरहेको छ भनिन्छ नि ?
म यस घटनाबाट आश्चर्यचकित भएको छु । मैले तमलोपा पार्टी छोडेको तेह्र महिना भइसक्यो । म माओवादी पार्टीको केन्द्रीय सदस्यता भएको पनि सबैमा जगजाहेर छ । बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनुजस्तो एकातिर मलाई कूटनीतिक नियोगबाट धम्की आउनु र तमलोपाबाट मेरो सभासद् पद खोस्ने निर्णय भयो भन्ने पत्र एकै दिन आउनुले तमलोपा पार्टीले आˆनो स्वतन्त्र निर्णयभन्दा पनि बाहिरी दबाबको कारण यो निर्णय गरेको प्रस्ट हुन्छ । त्यसकारण यसमा मेरो अपमानभन्दा पनि तमलोपा पार्टी र त्यसको नेता कसरी चलिरहेको छ भन्ने प्रस्ट भएको छ । तमलोपा पार्टीले मधेसको राजनीतिलाई आधार बनाएर विदेशी हित गरिरहेको छ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ । जुनबेला २०६२/६३ को आन्दोलन भइरहेको थियो । म त्यो आन्दोलनको संयोजक थिएा, त्यो आन्दोलनको क्रममा मधेसका दर्जनौा जनता सहिद हुनुभयो । जनतालाई मार्ने काम तत्कालीन सरकारले गरेको हो । त्यतिबेलाको मन्त्रिमण्डलमा अहिलेका तमलोपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर विज्ञान तथा वातावरण मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । मधेसी जनताको अपमान गरेर सहिदको रगतमा टेकेर महन्त ठाकुर आफूलाई मधेसको मसिहा भन्दै हुनुहुन्छ । मधेसी जनताले संविधानसभा निर्वाचनमा हराइदिएपछि उहाा मनोनीत सभासद् हुनुभो । मधेस आन्दोलन हामीजस्ता युवाहरूको कारण अगाडि बढेको हो । मधेस आन्दोलनमा लाग्ने जनताहरूमाथि गोली चलाएर मधेसी जनता मार्ने व्यक्ति अहिले त्यही सहिदको रगतमा टेकेर आफूलाई मधेसको नेता भन्नेहरूमाथि मधेसी जनताले चिन्तनमनन गर्छ । त्यसकारण राजनीतिक ढङ्गले मैले सभासद्बाट राजीनामा दिनुपर्ने कुनै कारण छैन । म माओवादी पार्टी प्रवेश गरेपछि अध्यक्ष प्रचण्डसाग म जनतामा गएर पुननिर्वाचित हुन चाहन्छु भनेको थिएा । उहााले त्यसरी नसोच्नुस् तपाईंको ’boutमा पार्टीले धारणा बनाउाछ भन्नुभयो । मलाई चुनावमा जान कुनै समस्या छैन । म चुनाव लड्न तयार छु ।
०	पार्टीले तपाईंलाई भारतीय दूतावासबाट आएको धम्की’bout के सोचिरहेको छ ?
पार्टी पदाधिकारीको बैठकले राजदूतावासले ममाथि भएको घटना’bout तत्काल आˆनो धारणा सार्वजनिक गर्न माग गर्‍यो । पछिल्लो समय हाम्रो अध्यक्ष र भारतीय राजदूतबीच जुन वार्ता भएको छ, त्यसबाट अध्यक्ष सन्तुष्ट हुनुहुन्न । अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा पार्टी नेतृत्वले सोचिरहेको छ ।
०	तपाईंमाथि भारतीय दूतावासबाट जुन व्यवहार भयो, त्यसले प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ नि ?
भारतको कूटनीति दक्षिण एसयामा कहीा पनि सफल मानिादैन । भारतको कूटनीति बङ्गलादेश, पाकिस्तानमा सफल छैन, जहिले विवाद भइरहन्छ । नेपालमा भारतीय कूटनीतिक शैलीका कारण नै ६३ प्रतिशतभन्दा बढी कम्युनिस्ट हाम्रो देशमा भएको छ । भारतीयहरूको ठूलो हस्तक्षेप भएर पनि यहाा ६३ प्रतिशत कम्युनिस्ट भएको छ । भारतीय दूतावासको शैलीका कारण भारतीय शैलीप्रति नेपाली जनताको विरोधको लामबन्दी बढ्दै गएको छ । मधेसतिर समेत भारतको हस्तक्षेपकारी गलत नीतिको कारण ठूलो पंक्ति भारतीय नीतिको विरोधमा गइरहेको छ । अहिले यही घटनाको कारण मधेसमा कित्ताबन्दी सुरु भएको छ । मधेसमा बढ्दै गरेको ध्रुवीकरणका कारण भारतीय गलत नीतिविरुद्धको जनमत बढ्दै गएको छ । यसतर्फ भारत सरकार सचेत हुन्छ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु । सबैचीज फेर्न सकिन्छ तर छिमेकी फेर्न सकिादैन, त्यसकारण छिमेकीसाग सौहाद्र वातावरण बनाउनुपर्छ ।
०	जुन तपाईंले भारतीय दूतावासबाट आएको धम्की’bout बाहिर सार्वजनिक गर्नुभो, त्यसपछि दूतावासबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छ कि छैन ?
मलाई व्यक्तिगत रूपमा भारतीय दूतावासबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । मैले यो घटना सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट दूतावासबाट एउटा विज्ञप्ति आएको थियो । त्यसप्रति समिति झनै आक्रोशित भएको छ । भारतीय दूतावासले यो आरोप आधारहीन छ, गैरजिम्मेवार छ र महत्व दिन जरुरी छैन भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेको छ । उहााहरूले आधारहीन भन्नुभयो मैले पााचवटा अलग-अलग व्यक्तिबाट आएको टेलिफोन नम्बर सार्वजनिक गरेको छु । यो विषयमा कसैले पनि आधारहीन भनेको छैन । म एउटा सभासद्माथि अपमानित व्यवहार भयो, त्यसको विरुद्ध म बोल्दा यो कसरी गैरजिम्मेवारपन हुन्छ ? मैले जति पनि अपमान सहनुपर्ने, मैले नबोल्नुपर्ने ? यो कदापि हुन सक्दैनथ्यो । त्यसकारण मैले घटना सार्वजनिक गरेा । महत्व दिन जरुरी छैन भन्ने जुन अभिव्यक्ति आएको छ, त्यो हेपाहा प्रवृत्ति हो, दूतावासको कर्मचारीबाट एउटा सार्वभौम मुलुकको सभासद्माथि धम्की आएको छ, त्यसलाई महत्व दिन जरुरी छैन भनेर दूतावासले नेपालप्रति के सोचेको हो ? यो सरासर हेपाहा प्रवृत्ति हो । यस विषयमा थप बुझ्ने काम हाम्रो पार्टीले गरिरहेको छ ।
०	यस घटनामा सम्बन्धित समितिका सभासद् मात्र एकजुट भए तर छ सय एक सभासद् नै एक हुनुपथ्र्यो नि होइन र ?
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानवअधिकारसम्बन्धी समितिले ऐतिहासिक निर्णय गरेर जनताको मन जित्ने काम गर्‍यो । यो विषय एउटा व्यक्तिको मात्र पनि होइन, राष्ट्रिय विषय हो । यो विषय सम्पूर्ण सभासद् र नेपाली जनताको विषय बन्नुपर्दछ । यस विषयमा सम्पूर्ण निर्णय पार्टीको जिम्मा छ । पार्टी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा सोचिरहेको छ । पार्टीले गर्ने निर्णय मानेर म अगाडि बढ्छु ।
०	अब अर्को विषयमा जाऔा, आगामी भदौ २ गते मुलुकले नयाा प्रधानमन्त्री पाउनेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
आगामी भदौ २ गते हुने प्रधानमन्त्री चयनको पााचौा निर्वाचनबाट मुलुकले नयाा प्रधानमन्त्री पाउाछ भन्नेमा म विश्वस्त छैन । ठूलो आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा गर्न र त्यसलाई संस्थागत गर्न बहुमतीय प्रणालीमा जानु हुादैन भन्दै आएको पार्टी माओवादी नै हो । संक्रमणकाललाई पार लगाउन हामीलाई सहमतीय बाटो नै आवश्यक छ । दुर्भाग्यवश संविधानमा उल्लेखित संविधानसभा निर्वाचनबाट ठूलो पार्टी भएर आएपछि पनि चार महिनासम्म प्रधानमन्त्री छोड्नु भएन । कााग्रेसले प्रस्तुत गरेको अलोकतान्त्रिक गैरसंवैधानिक व्यवहारका कारण नै मुलुक सहमतीय मार्गमा अगाडि बढ्न सकेन । मुलुकलाई निकास नै नदिने भएपछि माओवादी बाध्य भएर बहुमतीय प्रक्रियामा गएको हो । जसले हिजो सहमतिमा जाउाभन्दा विरोध गरे त्यही शक्ति कााग्रेस र एमाले अहिले सहमतिमा अगाडि जाऔा भनिरहेका छन् । यो इमानदारीताका साथ आएको हो कि होइन प्रशस्त शंका गर्ने ठाउाछ । इमानदारिताका साथ कााग्रेस, एमालेले सहमति भनेका हुन् भने हाम्रो एजेन्डा पनि सहमतीय नै थियो, सहमतिमा अगाडि जाऔा । अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरी अगाडि बढौा । आ-आˆनो पार्टीको हैसियतअनुसार अगाडि बढौा र मुलुकलाई शान्ति र संविधानमार्फत् निकास दिऔा भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा रहादै आएको छ । राष्ट्रिय सहमति गरेर अगाडि बढ्न माओवादी पार्टी सधैा तयार भएको छ ।
०	अन्त्यमा आमजनसमुदायलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ?
म सर्वप्रथम नेपालको मिडियाहरूलाई Åदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु । नेपालको मिडियाले मधेसी व्यक्तिलाई समस्या पर्दा खासै महत्व दिादैन भन्दै आएको थियो, यो प्रकरणमा त्यो नजिरलाई तोड्ने काम नेपाली मिडियाले गरेको छ । सञ्चार माध्यमले ममाथि भएको घटनाको सम्बन्धमा खेलेको भूमिका सह्रानीय छ । त्यसको साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिष्य सम्बन्ध तथा मानवअधिकार समितिलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु । पार्टीलाई पनि यस सन्दर्भमा मैले धन्यवाद दिनैपर्छ । सम्पूर्ण पक्षबाट हुने दबाबले हाम्रो राष्ट्रियतामाथि भएको हस्तक्षेपलाई निरुत्साहित गर्छ । राष्ट्र र राष्ट्रियताको सवालमा सधैा सबै एकजुट हुनुपर्छ ।